I-RIP: UFrank Batten Sr-I-Billionaire ongazange weva ngayo | Martech Zone
NgoLwesibini, Septemba 15, 2009 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 10, 2016 Douglas Karr
Uninzi lwabantu aluzange luve ngoFrank Batten Sr ngaphandle kweHampton Roads, eVirginia. Ukuqala kwam ukushiya uMkhosi wamanzi waseMelika ndisiya kusebenza eVirginian-Pilot, zange ndive nto ngaphandle kwezinto ezinkulu ezivela koonondaba ababesebenzela iphephandaba xa babethetha ngalo UFrank Sr. Wayeyaziwa ukuba uza kuphuma koomatshini bokushicilela kwaye ancokole nabo bonke abasebenzi-uninzi lwabo wayeyazi ngegama de iinkampani zakhe zikhule kakhulu.
Kwiminyaka emininzi, abasebenzi beLandmark bafumana usuku lwabo lokuzalwa kwaye bafumana iibhonasi zeveki ezi-2 ngeKrisimesi. Xa amaxesha enzima okanye amasebe esongekile, khange sibabeke phantsi emsebenzini-abasebenzi bathathe umhlala-phantsi ngokuzithandela okanye basiwa kwezinye izikhundla kwinkampani. Kwakusoloko malunga nabasebenzi kunye noFrank.
Xa unxibelelwano lweLandmark lwamkele ulawulo olupheleleyo lomgangatho, ekujoliswe ekukhetheni ekujoliseni, kunye neenkqubo zokuphucula eziqhubekayo, bonke abaphathi bafanele balufumane lonke uqeqesho abalifunayo. Kwiminyaka yam yamashumi amabini, ndaye ndaya kuqeqesho lobunkokeli kwaye ndadibana noFrank buqu. Kwiminyaka embalwa emfutshane, ndiye ndafumana amava obunkokeli kunye nawolawulo ngakumbi kunabantu abaninzi abanemisebenzi yonke. UFrank wayekholelwa ukuba abasebenzi abangcono bafundisiwe kwaye baphathwa, ngcono inkampani iqhuba. Isebenzile.
Ngelo xesha, uFrank wayezifundisile ukuthetha ngokugquma emva kokuphulukana nelizwi lakhe kumhlaza womqala. Unokuliva ngokucacileyo ilizwi lakhe. Omnye umntu wabuza, “Yimalini ngokwaneleyo, Frank?” Impendulo yakhe yayikukuba yayingeyomali - yayi malunga nokufumana ikamva lenkampani kunye nokucinga ngazo zonke iintsapho ezazinophahla ngaphezulu kwentloko yazo.
Elona bali limnandi uFrank alithethileyo kukusungulwa kwe Imozulu Channel. Njengokulila njengoko kuvakala, inkampani yayisopha imali kwaye uFrank wathi wayenazo zonke iziliphu ezipinki kuwo wonke umntu. Uthathe ithuba, nangona kunjalo, wathetha-thethana ngentlawulo yekhaya ngalinye neenkampani zentambo ezitshintshe yonke imboni! Yazisa enye yeendlela eziphumelele kakhulu kumabonakude wentambo. Ukuba ebengazange alwe nomhlaza womqala, ngesibe sinayo iNethiwekhi yeLandmark News Network endaweni ye-CNN kaTed Turner.
Abantu abazi ngoFrank Batten kuba wayengumntu ozolileyo, othobekileyo. Ndiyakhumbula xa inkampani inyanzela uFrank ukuba avuselele iiofisi zakhe kwaye asuse isofa kunye nedesika ebethwayo wayenayo iminyaka emininzi. Wayeyintshatsheli yokwenyani kwinkampani, eluntwini kwanasebuntwini. Ngexesha lokwahlulahlula, wabeka ubomi bakhe emngciphekweni kwaye waqhubeka nokuthetha ngokudibanisa kuba yayiyinto elungileyo ukuyenza.
Lusuku olubuhlungu kum kwaye uvelwano lwam luphuma lusiya kusapho lwakhe, ngakumbi uFrank Batten Jr. Ndinebhongo lokuba ndidibene noFrank Batten, Sr. Xa ndilinganisela impumelelo yabantu, kuhlala kuchasene noko ndikhumbula ngoFrank. Wayethobekile, esebenza nzima, enombulelo, ebaphatha kakuhle kakhulu abasebenzi bakhe, kwaye ebekwazi ukukhulisa amashishini akhe ngokucacileyo. Akukho mntu wakha walinganisa kwaye andiqinisekanga ukuba ngubani oya kuze!
Funda ngokugqithisileyo Malunga nobomi bukaFrank Batten obumnandi njengoko ibhaliwe ngu-Earl Swift kwiVirginian-Pilot. UFrank Batten Sr wayengusozigidigidi ekusenokwenzeka ukuba zange uve ngaye-kodwa unokufunda lukhulu kubomi awayebukhokela.
Ifoto esuka kwiVirginia-Pilot
tags: ibhiliyoniUFrank batten srzonxibelelwanophilanthropistububelevirginian-iplothiUmjelo wemozulu
Sep 16, 2009 ngo-2: 47 PM
UDoug, yeka imbeko entle emntwini ekucacileyo ukuba ikuncede wakubumba. Sonke kufuneka sibe nethamsanqa lokuba "noFrank" sijonge kuye kwimisebenzi yethu!